TENY MALAGASY ISAN’ANDRO – Blaogin'i Voniary
Miroso hatrany isika amin’ny ezaka fampiroboroboana ny tenindrazantsika. Voambolana malagasy folo fampiasa andavanandro no natao fanamby tamin’iny volana lasa iny. Tohizantsika amin’ny teny hafa indray izy amin’ity volana ity.
Nahafinaritra ny nahita ny hafanam-pon’ny maro tao amin’ny Facebook nanoloana ilay fanentanana nataoko mikasika ny fampiasana teny malagasy isan’andro. Izany no isarihana ny sain’ny tsirairay hoe tsy sarotra akory ny tenindrazantsika fa isika no tsy zatra mampiasa azy. Efa tsy mampaninona antsika indraindray ny manao vary amin’ny vato (tsy vary amin’anana), mampifangaro ny teny gasy sy teny vahiny. Azo ialana anefa izany, saingy mila fikirizana sy ezaka mitohy. Mirary anao àry hafana fo hatrany amin’ny fitenenana voambolana malagasy araka izay azo atao.
Tsaratsara kokoa ny mametraka fanamby mba hisy fientanam-po ianao ka hiezaka. Ireo teny vahiny folo fampiasanao indrindra no ezaho avadika amin’ny teny gasy. Ataovy talaky maso amin’ny petadrindrina ao an’efitranonao na raiketo an-tsoratra ao anaty diarinao. Rehefa tonga ny volana manaraka dia mandraisa teny folo hafa indray. Ny mahafinaritra dia rehefa zatra ianao dia tsy mianona amin’ireo voambolana voafaritra ireo fa tonga dia misy fanairana maneno ao an-tsainao raha vao mitady hiteny safiotra iny ianao. Toy izany no iainako amin’izao fotoana izao.
Ireto indray àry ny ahy ny teny folo :
Aza misalasala manontany ny Blaogin’i Voniary raha misy teny manahirana anao. Mazotoa àry ô!
ezaka teny gasy, facebook malagasy, fanamby folo voniary, teny gasy, teny malagasy, voambolana malagasy